Maitiro ekunyora hunhu hweiyo Apple logo kubva kune chero chishandiso. | IPhone nhau
Unoziva here kuti pane hunhu neiyo Apple logo? Isu tinotsanangura kuti tinganyora sei.
Izvi zvinoratidza Apple logo seyinyorwa mavara.
Zvese zvishandiso kubva kukambani yeCupertino zvine mukana wekunyora iyo manzanita logo, kunyangwe iyi sarudzo mune dzakawanda kesi inoramba iri "yakavanzwa". Muchikamu chino tichatsanangura maitiro aunga nyora, zvinoenderana nechishandiso chauri kushandisa
Ichi chiratidzo chakanyatso kuburitswa pane chero Apple chishandiso, zvingaite sei neimwe nzira. Inogona kunyorwa pane ese ari maviri iOS uye macOS kana TVOS. Iko kwatisingakwanise kuzviita zviri muWatchOS.
Mune mamwe masystem anoshanda uye mumabhurawuza eWebhu, iyo logo pachayo haiwanzo kuoneka, asi nzvimbo isina chinhu kana chimwe chiratidzo chinoshamisa. Izvi zvinodaro nekuti hunhu hweApple logo, senge yeWindows kana chero imwe logo yemubatanidzwa, inorondedzerwa se "yega yekushandisa hunhu" mukati meASCII yakawedzerwa hunhu hwakaiswa. Naizvozvo rusununguko rwekusununguka rwekuti chikuva chinoda kuchiratidza kana kwete.
Iyo Apple chiratidzo inosanganisirwa muASCII yakawedzerwa hunhu hwakaiswa neaya maitiro:
Zvakanaka, mushure mesumo iyi ngatienderere mberi kutsanangura maitiro ekunyorera iyo Apple logo, zvinoenderana nechishandiso chiri kushandiswa:
2 Iphone uye Ipad
Kunyora chiratidzo cheApple pane Mac yako, shandisa inotevera kiyi yekubatanidza:
Sarudzo (⌥) -Shift (⇧) -K
Kuti utarise nzvimbo yemavara paMac keyboard, sarudza sarudzo Ratidza keyboard muoni muhwindo rinobuda Fuentes mune macOS menyu bar.
Iwe unogona zvakare kuwana kuburikidza Sarudzo dzeSystem> Keyboard> Input Sources
Kiyi yekubatanidza mu macOS kunyora Apple logo
Iwe unogona zvakare kugovera iwo diki chinyorwa kuratidza chiratidzo, sezvaunozoona pazasi.
IOS inobata iyo keyboard zvakasiyana, saka isu tinofanirwa kugovera iwo mavara kune iyo logo, tichitevera aya matanho akapusa:
Handei ku Zvirongwa> Zvakajairika> Keyboard> Shanduro yemavara uye kamwe pano tinodzvanya pa «+»Kuwedzera chinyorwa chitsva chakapihwa chiratidzo. Dzokera kuSafari uye teedzera iyi logo  . Namira mumunda «Frase»Uye riipe izwi mu«Kurumidza basa", Semuyenzaniso: "lg«. Sevha uende. Zvino, pese paunonyora «lg»Iwe unenge uine mukana wekubaya pabup-up balloon uye chiratidzo chinonyorwa. Kutonhora, handiti?
Semuenzaniso maitiro ekutsiva "lg" neiyo Apple logo.
Kubva ikozvino zvichienda mberi, unogona kutotonyora Apple logo uchishandisa yako iOS kana Mac chishandiso mumaemail ako, zvinyorwa, zvinyorwa, zvinyorwa, nezvimwe; ingodzvanya nzvimbo yemubhawa mushure mekunyora nzira pfupi "lg" uye iyo system inoitsiva neapuro.
Zvinyorwa zvinotsiva zvinochengetwa zvakawiriraniswa paIOS uye macOS kuburikidza neICloud, kuti ugone kushandisa nzira imwechete pamidziyo yako yakasiyana.
Uye kana ukabatanidza keyboard reBluetooth ne iPhone yako nePadad, unogona kuisa chiratidzo cheApple nekuchimanikidza. Sarudzo (⌥) -Shift (⇧) -K ku sezvakangoita paMac yako.
Sezvandambotaura musumo, hazvisi zvese zvakakwana muJob zvisikwa, uye hapana nzira yekunyora yedu nyowani logo kubva kuApple Watch.
Pano tinoona kuti logo yacho inoratidzika sei paApple Watch
Neraki, iyo Apple Watch inoratidza apuro, nekuti inosanganisirwa mune yakasarudzika mafonti eiyoOSOS inoshanda sisitimu, sekureba sekunge takainyora kubva kune imwe iOS kana macOS chishandiso.
Nzira yakapusa kushandisa Apple TV Remote. Pane yako iPhone kana iPad ine iOS 11 kana yepamusoro, enda ku Zvirongwa > Control Center> Gadzirisa zvidzoreso uye kubata "+" rinotevera Apple TV Remote . Iine Apple TV Remote widget yakawedzerwa kune yako iOS Kudzora Center, simbisa chero mavara ekuisa mavara pane yako Apple TV uchishandisa yako Siri Remote.
Pane yako iPhone kana iPad, vhura nzvimbo yekudzora uye tora pawijeti iwe wauchangobva kuwedzera, wobva wasarudza yako Apple TV kubva pane zvinyorwa uye pinda iyo kodhi yekuwana manhamba mana inoratidzwa paApple TV skrini, kana zvichidikanwa. Zvimwe, rova chiziviso iyo inoonekwa pane yako iPhone yekuvhara skrini paunosarudza ndima yemavara pane yako Apple TV.
Tinogona kuzivisa iyo Apple logo kubva Remote TV
Iyo Control Center widget inoshanda chete nechina chizvarwa Apple TV uye Apple TV 4K, uye inoda iyo iPhone kana iPad ine iOS 11 kana gare gare.
Kana yako Apple TV iri yechinyakare modhi, unogona kurodha yemahara Apple TV Remote app kana iTunes Remote app kubva kuApp Store uye woimisa iyo kure kudzora yako tambo bhokisi. Iwe unozogona kunyora iyo Apple logo uye kuwana mamwe mabasa, senge mutambo mutambo uye mutambo uri kuenderera.
Iwe haugone kuisa chiratidzo paApple TV uchishandisa Dictation.
Sekutsanangura kwandakaita pakutanga, Apple apuro rinotsanangurwa muhurefu hweASCII hunhu hwakaiswa mune imwe yakavanzika mashandiro ehunhu poindi yakagadzirirwa zviitwa uye zvishandiso zvinoda kuratidza zviratidzo zvisina kutaurwa neiyo Unicode standard.
Nekudaro, Unicode haina marogo emakambani sechikamu cheyakajairwa hunhu hwakaiswa. Ndosaka chiratidzo cheApple chiri muPDF kana gwaro reIzwi mune dzakawanda kesi chisingaratidzike sechinoonekwa kune asiri-Apple mapuratifomu akadai seWindows neLinux
Izvi zvinoreva kuti, kana iwe ukanyora iyo logo muemail, iyo inogamuchira yakafanana ichaona apulo kana chishandiso chiri Apple. Kana zvisiri, une nhamba zhinji dzausingaone.
MuWindows, pane nzira dzakawanda dzekuisa mavara akakosha. Tichatarisa pa ALT macode izvo zvinoda kubatisisa pasi kiyi yeAlt uchinyora 4-kodhi decimal kukosha.
Vhura documento kwaunoda kuisa chiratidzo cheApple logo.
Ita shuwa iyo Num Lock kiyi yakavhurika, uye bata bata Alt akabva .
Press "0240" pane keypad yekodhi.
NOTA: unofanirwa kuisa zero inotungamira kunyangwe kodhi yedhisheni yemunhu iri "240".
Kana yako Laptop ikashomeka manhamba keypad, ita izvi:
Vhura documento kwaungade kuona iyo Apple logo chiratidzo.
Press F 8 FF pane iyo keyboard (iyo Unicode kukosha kweiyo Apple logo chiratidzo).
Press Alt-X .
Chiratidzo cheApple chichaiswa panzvimbo yazvino yekoroko.
Iyo Apple logo kana chero imwe yakasarudzika hunhu kana mucherechedzo inogona kunyorwa pane ako blog mablog kana mapeji ewebhu nekushandisa iyo hexadecimal notation yezvinhu HTML inoteverwa nehexadecimal kukosha kwe Unicode (Iyo Apple logo chiratidzo ine kukosha kwe Unicode F8FF).
Kuti ushandise logo yeApple pawebhu peji rako, nyora zvinotevera muHTML kodhi:
Iwe unofanirwa kuona iyo  hunhu kana peji racho raitwa mubrowser.
Aya ndiwo mikana yese yakasiyana yaunofanirwa kumiririra chiratidzo cheApple sehumwe hunhu, zvinoenderana nechishandiso chauri kushandisa panguva iyoyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Unoziva here kuti pane hunhu neiyo Apple logo? Isu tinotsanangura kuti tinganyora sei.
Sezvo Audi Expert achiwedzera kuti iyo imwechete Apple logo, kana ikaiswa pakutanga kwezita rechishandiso (iyo iPhone semuenzaniso), inotungamira kuchiratidziro mumotokari dzine MIB2 + (chizvarwa chitsva chine chekubata skrini) logo yemakete mana yeAudi kutsiva apuro apple.
Apple ichaburitsa iyo 3D Kubata chimiro, uye izvo zvinonditsamwisa ini
Aya angave ari matatu iPhone 11 iyo Apple inogona kuburitsa kudonha uku